» अत्याधुनिक बन्दै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, साउन १ गतेदेखि नयाँ सफ्टवयरको परिक्षण सुरु
अत्याधुनिक बन्दै राष्ट्रिय बीमा संस्थान, साउन १ गतेदेखि नयाँ सफ्टवयरको परिक्षण सुरु
२० असार २०७८, आईतवार १५:००
काठमाडौं । देशकै सबैभन्दा पुरानो जीवन बीमा कम्पनी राष्ट्रिय बीमा संस्थानले आगामी साउन १ गतेदेखि नयाँ सफ्टवयर प्रयोग गर्ने भएको छ । संस्थानलाई समय सापेक्ष प्रविधिमैत्री बनाउने उद्देश्यले अत्याधुनिक सफ्टवयर जडान गरेर अत्याधुनिक र प्रविधिमैत्री बनाउन लागिएको संस्थानका प्रमुख प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले जानकारी दिए ।
संस्थानमा जडान गरिएको आईसोलुशन लाइफ नामक सफ्टवयर परिक्षण सुरु गरिएको छ । बीमा सम्बन्धी सफ्टवयर निर्माता कम्पनी दर्शन टेकले तयार पारेको ‘आईसोलुसन लाईफ’ सफ्टवयरमा पुरानो सफ्टवयरबाट डाटा माइग्रेट सफल भएको छ । २० वर्षभन्दा पुरानो सफ्टवयरबाट डाटा माइग्रेशन गर्न निकै चुनौतिपूर्ण मानिएको थियो । उक्त कार्य सफल भएको संस्थानले जनाएको छ । नयाँ सफ्टवयरमा प्रवेशसँगै बीमा संस्थानको तथ्याङ्कहरु अब झन सजिलो हुने भएको छ ।
संस्थानले गत वर्षदेखि नै नयाँ सफ्टवयर बनाउन सुरु गरेको थियो । अब अन्तिम चरणमा पुगेको संस्थानले जनाएको छ । सो क्रममा पछिल्लो पटक संस्थानले तीन दिनसम्म कारोबार इन्ट्री बन्द गरेर पुरानो सर्भरको डाटा माइग्रेट गर्ने कार्य सम्पन्न गरेको जनाएको छ ।
हाल परिक्षणको चरणमा रहेको सफ्टवयर एक सातासम्मको सुक्ष्म विश्लेषणसँगै आगामी साउन १ गतेबाट पूर्ण रुपमा सञ्चालनमा आउने संस्थानले जनाएको छ । संस्थानका प्रमुख प्रशासक कवि प्रसाद पाठकले आजदेखि नयाँ सफ्टवयर परिक्षण गरिएको र एक साताको परिक्षणपछि आगामी साउन १ गतेबाट सम्पूर्ण रुपमा नयाँ सफ्टवयरबाट काम गरिने जानकारी दिए ।
५७औं वार्षिकत्सवको अवसरमा राष्ट्रिय वाणिज्य बैकद्धारा विभिन्न सेवामा छुट
एनसीसी बैंकद्धारा चालु आवको लागि लेखापरीक्षक नियुक्त
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सद्वारा मृत्यु दाबी भुक्तानी
खानीखोला हाइड्रोपावरको नयाँ संचालक समिति गठन, अध्यक्षमा विजयमान शेयरचन
सुन तोलामा १ सय रुपैयाँले वृद्धि, प्रतितोला कति ?
मल्टीपर्पस फाइनान्सको ७९ हजार कित्ता संस्थापक शेयर आजदेखि बिक्रीमा
किसान लघुवित्तद्धारा २५ प्रतिशत बोनस शेयर घोषणा
सानिमा जनरल इन्स्योरेन्स सहित ५ कम्पनीद्धारा लेखापरीक्षक नियुक्त
नेको इन्स्योरेन्सद्धारा लाभांश प्रस्ताव, बोनस र नगद कति ?
नाडेप लघुवित्तको शेयर मूल्य समायोजन
एभरेष्ट बैंकले आजदेखि दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको ऋणपत्र बिक्री खुला
जोशी हाइड्रोपावर कम्पनीको तीन आर्थिक वर्षको वार्षिक साधारण सभा आज हुँदै